TV & Nkiri Ndị enyi
Homer Simpson. FOX
Homer Simpson bụ ihe ijuanya na ọ bụ na Simpsons . Ulo oru ahia ndi ahia ya na ndi mmadu ndi ozo di egwu, ma okwu ya di egwu na-eme ka o di mfe ikwu okwu.
Enwere m ihe ngosi nke iri nke Homer Simpson's funniest quotes so you can easily share them on Facebook. Maka onye nke ọ bụla, m ga-atụ aro otu ị ga-esi jiri ya mee ihe, ma nye gị ụfọdụ ihe ọmụma dị na ntinye okwu ahụ.
Pịa site na slides ịkọrọ òkè Homer Simpson.
Homer Simpson Kwuru banyere nri nri abalị. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu : "Nwa m nwoke, oge nri abalị, ezumike zuru oke n'etiti ọrụ na mmanya."
Ekikere aro : Zipu ọkpụkpọ Facebook maka nri abalị ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mmanya.
Ụdị : "Kpọọ N maka Nerder" na Simpsons Oge 19 . Marge na-eri nri na-edozi ahụ nke na-etinye Homer na nri siri ike, mana Homer kpebiri ịbanye na nri na nri n'akụkụ. Marge na-enyo enyo maka uru bara uru nke Homer na-akpọ ndị na-emepụta "Ndị Sneakers," nke na-ewepụ "Ndị na-egwu egwu."
Homer Simpson na-ekwu banyere Donuts. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu : "Donuts. Ọ dị ihe ọ bụla ha na-apụghị ime?"
Aro ndị a na-atụ aro : Ka ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ mara banyere onyinye na-ezitere onwe ha na ụlọ ọrụ, ma ọ bụ kpọọ enyi gị maka nri ụtụtụ.
Egwuregwu : "Marge vs. Monorail" na Simpsons Oge nke anọ . Mgbe Mr. Burns kwụrụ $ 3 nde iji kwado mkpofu agha nuklia, ndị Springfield kpebiri ịmepụta otu monorail nke dara ọsọ ọsọ. Leonard Nimoy kpakpando ndị ọbịa.
Homer Simpson kwuru banyere Turkey. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Ịga ezumike oyi anaghị atọ ụtọ dị ka ọ na-ada."
Ekikere aro : Enwere enyi gị nke na-agbalị ịkwụsị àgwà ọjọọ? Kwuo ihe a na Facebook iji mee ha ọchị. Ma ọ bụ kesaa ya dị ka òkù maka nri nri abalị.
Egwuregwu : "Izu ụka na Burnsie" na Season 13. Ndị Phish dị iche iche na-abịa na ihe omume nke Dr. Hibbert na-edezi wii wii ọgwụ maka Homer anya ọjọọ, na ụbụrụ ndị na-eweta ọṅụ na Homer bụ nkwalite site n'aka Mr. Burns.
Homer Simpson Kwuru Banyere Ntị. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Ọ bụ nanị na enweghị m mmasị apụtaghị na anaghị m ege ntị."
Ekikere a na-atụ aro : Dee okwu a n'oge arụmụka ọkụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ n'oge enyi enyi gị. Ị nwekwara ike ịkekọrịta ya naanị iji mee ka ụbọchị mmadụ na-achị ọchị.
Egwuregwu : "Bart vs. Thanksgiving" na Simpsons Oge 2. Bart na-agbahapụ n'ụlọ mgbe ọ "na-emeghị ihe ọ bụla" ọkụ ọkụ Lisa ma jụ ịrịọ mgbaghara banyere ya.
Ọ Dịtụghị Mma
Homer Simpson na-ekwu, Ị Dịtụbeghị Mma. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "N'agbanyeghị na ị dị mma, ihe dịka otu nde mmadụ dị mma karịa gị."
Ihe a na-atụ aro : Kwuo nke a Homer Simpson na-ekwu dị ka ụzọ na-agba ume iji keleta enyi, ma ọ bụ ụzọ dị mma iji gbaa mmadụ ume, ma ọ bụ dị ka bọmbụ mgbe bọmbụ egwuregwu kachasị amasị.
Ụdị : "Homer na Bat" na Simpsons Season 3 . Mgbe Mr. Burns na-akwụ $ 1 nde na ụlọ ọrụ ya nwere ike ịkụ ndị otu egwuregwu ike, ọ na - agba ụda kpakpando Major League iji dejupụta akwụkwọ ozi ya.
Homer Simpson na-ekwu banyere ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Ịṅụ mmanya na-aba n'anya! - Ihe kpatara nsogbu niile nke ndụ!
Ekikere aro : Kwuo nke a Homer Simpson na-akpọ òkù ịkpọ mmadụ òkù ka ọ ṅụọ, ma ọ bụ mgbe ezigbo enyi nwere ụbọchị kachasị njọ.
Egwuregwu : "Homer na nkeji iri na asatọ" na Season 8. Homer malitere ịzụ ahịa azụ mgbe Springfield ghọrọ obodo kpọrọ nkụ.
Homer Simpson na-ekwu maka ọdịda. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Ịgbalị bụ nanị nzọụkwụ mbụ ị ga-eme n'ọdịda."
Ekikere a na-atụ aro : Zipu nkwekọrịta obi ike nke enyi gị ma ọ bụ onye ọrụ ibe.
Egwuregwu : "Eziokwu Bụrụ" na The Simpsons Season 9 . Marge na-amalite ịmecha eziokwu ahụ iji ree ụlọ na ọrụ ọhụrụ ya dị ka onye na-ere ụlọ.
Homer Simpson na-ekwu banyere TV. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Na-enweghị TV, ọ na-esiri ike ịmara mgbe otu ụbọchị ga-agwụ ma onye ọzọ amalite."
Ejiri aro : Kwuo nke a Homer Simpson dị egwu n'oge Scree-Free Week ma ọ bụ iji nyere aka kọwaara ya ihe mere ị jirila oge ezumike maọbụ mgbe ọrụ TV gị dị ala.
Egwuregwu : "Onye Ozi Ala: Nke Na-apụghị Ime Eme" na Oge 11. Homer ghọrọ onye ozi ala ọzọ nke South Seas na-agbapụ na ndị iwe iwe PBS na-agụnye Betty White, onye chọrọ ịnakọta nkwa ya nke $ 10,000. Ihe kacha amasị m: "Nyere m aka, Je-bus!"
Homer Simpson na-ekwu maka ịgha ụgha. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Ọ na-ewe mmadụ abụọ ka ha ghaa ụgha, otu ịgha ụgha na otu iji gee ntị."
Aro ndị a na-atụ aro : N'okwu a, ọ na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkparịta ụka ọ bụla banyere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na United States. Ị nwekwara ike izigara ya enyi ọzọ nke na-enwe mmasị na The Simpsons .
Egwuregwu : "Colonel Homer" na Simpsons Oge nke 3 . Homer na-abụ onye nchịkwa nye onye ọbụ abụ Lurleen Lumpkin, megide ọchịchọ Marge.
Ụmụ nwanyị na Beer
Homer Simpson na-ekwu banyere Women na Beer. Nancy Basile / About.com
Na-ekwu, sị: "Nwanyi dị ka biya, ha dị mma, ha na-esi ísì ụtọ, ị ga-agafekwa nne nke gị iji nweta otu!"
Ekikere aro : Jiri Homer Simpson kwuo mgbe ị na-ekwu maka ụmụ nwanyị ma ọ bụ biya. Ma ọ bụ ọbụna ma. Anaghị m atụ aro iziga ya na ndị inyom gị ndị ọzọ n'ụbọchị Valentine, Otú ọ dị.
Egwuregwu : "New Kid on the Block" na Simpsons Oge nke 4 . Bart na-esi ike maka nwa agbọghọ ahụ na-esote ya, mana obi gbawara ya mgbe ọ malitere ịlụ Jimbo.
Chọrọ ihe ọzọ?
Ị nwere ike ịnweta ihe ndị ọzọ, ihe ọmụma na-enweghị isi na nkwụnye ihe ọmụma na Simpsons na njikọ ndị a.
Homer Simpson's Biggest Business #Fails
Tupu Emoji, e nwere Simpsons ASCII Art
Kedu ihe kacha amasị gị? Gwa m na Twitter ma ọ bụ Facebook.
10 Ndekọ TV kachasị mma nke '90s
Julia Stiles Falls maka Royal na "The Prince & Me"
Kasị Mma ndị na-ese foto nke ndị nwanyi na-ahụ maka ndị nwoke
Top 10 'Ndị enyi' Ndị na-arụ ọrụ obere
Jane Fonda Na-ekwurịta banyere "Mkpụrụ na-Iwu" ma na-arụ ọrụ na Jennifer Lopez
20 Ọtụtụ ngosipụta nke 'Simpsons'
'Ndị Simpsons' Main Characters
Ihe nkiri Edebere 'Saturday Night Live'
Ụbọchị Saturday kachasị mma na-adị ndụ na Christmas
Best 'Ọ na-acha mgbe niile na Philadelphia' Quotes
Ụwa Ọhụrụ maka New Horizons iji nyochaa
Kedu ihe bụ Neurolinguistics?
Aha DIAZ aha na mmalite
Ngalaba Mgbakọ maka Verb Ịtali Guardare
United States na Japan Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị
Starfish na okpueze
Apollo 4: Na-enwetaghachi site na Mberede Ọhụụ Mbụ
Ihe nkiri kachasị njọ ma dị njọ nke oge niile
Aries Ọnwa (Ụzọ) - Ọnọdụ na Ihe Omume
Ezigbo Ụdị Omume Nkọwa
Nyochaa: Onye 'Na-ebi Ndụ Hyde Park' 50th Anniversary DVD
Ịnakọta GI Joe Action Figures
'Jeopardy!': 10 Ihe kachasị emetuta oge
Agha nke narị afọ: Agha Crecy
Mụta banyere Mmetụta Omume
2016 TOEIC Oge nyocha na ule
Turkey ekele maka ndị LDS (Mormon) Ụmụaka Ụmụaka
Mmetụta na-eme ka uru m bara uru bara?
Ihe Odide Ugaritic gosipụtara mmetụta na-emetụta Abraham
'Tess of the Urberville' Quotes
Best Salsa Music nke Oge niile
Ndepụta nke ndekọ kachasị oke na klas ndị ọkachamara
Otu esi ejikọta "onye mmuta"